निर्मला हत्या काण्ड अनुसन्धानमै सिमित बनाउन यस्तो चलखेल – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्मला हत्या काण्ड अनुसन्धानमै सिमित बनाउन यस्तो चलखेल
निर्मला हत्या काण्ड अनुसन्धानमै सिमित बनाउन यस्तो चलखेल
काठमाडौं -सयौं अपराधी छुटून् तर एक जना निर्दोषले सजाय नपाओस्, त्यसै भनिएको होइन । त्यसैले चाहे जो कोही होस् अभियुक्त लुकाएर लुक्दैन र कानुनी राजका लागि पत्ता लगाउन जरुरी पनि छ ।कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ७३ दिन पुगेको छ । तर हत्या अनुसन्धान शून्यमै छ । अनुसन्धान लम्बिँदै जाँदा घटना झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
हत्या भएलगत्तै प्रहरीले सुरुवाती अनुसन्धानमा लापर्बाही गर्दा कतिपय प्रमाण नष्ट भएका छन् । जसका कारण अनुसन्धान डीएनए र पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भर पर्नुपरेको थियो । तर डीएनए पनि नेगेटिभ आएपछि अनुसन्धानको पाटो अब कता भन्ने प्रश्न आमजनमानसमा उब्जेको छ ।घटनाको अनुसन्धानका लागि ६ टोली खटियो तर अनुसन्धान शून्यमै छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएकाे छ ।
हेर्नैपर्ने: महिलाहरुलाई अर्धनग्न बनाउँदै, लछारपछार गर्दै पिट्दै डिएसपी टोली.. भिडियो हेरेर एक सेयर अवस्य गराैं
एउटा केटोले पुग्दैन भन्दै सोनिकाले स्टेजमै कपडा खोलेर गरिन यस्तो हरकत – हर्नुहोस भिडियो
आफ्नै अलपत्र नागरिकको समस्या सुनेन भारतीय राजदुतावासले, श्री सत्यसाई सेवाले यसरी गर्यो उद्धार (भिडियो सहित)
दिनमा सात वटा लास पोल्ने चन्द्र बहादुर भन्छन– ‘मलाई घिन लाग्दैन तर रातभरी भुतले तर्साउछ’ – भिडियो अन्तरवार्ता
चर्चित गायिका शान्तिश्री परियारले गाएको तीज गीत यस्तो भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)
फेरी हराईन २१ बर्षीय कल्पना, ११ दिन देखि बेपत्ता, खोजिदिन परिवारको आग्रह
कलेजकी प्रोफेसरसँग बाध्य भएर अन्तिममा ति….
कस्तो बि डम्बना ? बुवाको किरिया बस्दा आ गला गी, आमाको दुई दिन पछि मृत्यु, जेठो छोराले पनि छोडे संसार